गाईको मासु खाएकै कारण अछूत हुने भए ब्राह्मणहरु कसरी छूत भए ? — JagaranMedia.Com
राजकिशोर रजक प्रकाशित : २०७४/१०/८ गते
हिन्दू समाजमा छुवाछूतको उत्पति सन्दर्भमा ठोस आधार आम जनसमुदायको स्तरमा छलफल भएको जस्तो लाग्दैन ।
हिन्दू आफैमा एउटा मिथक मात्र हो । हिन्दू नाम पनि एउटा विदेशीहरूले राखेको नाम हो । यो नाम मुसलमान समुदायले सवर्णलाई आपूmभन्दा अलग राख्ने क्रममा दिएको नाम हो । अरबका मुसलमानहरूले भारतवर्षमा आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले लेखिएका कुनै पनि संस्कृत ग्रन्थमा हिन्दू शब्द उल्लेख भएको पाइँदैन ।
दास, नाग, द्रविड : अलग अलग हुन् ?
छुवाछूत उत्पतिको मूल कारण बौद्धलाई अपमान :
(सामाजिक अभियानकर्ता रजक अम्बेडकरी मुभमेन्ट तथा विचारको नजिक छन्)